Hevitra MPANOHARIANA | Febroary 2020
2020-02-25 @ 08:41 in Toekarena
Misy ny gazety malagasy sasany no tsy fampahafantarana ny zavamisy intsony no ataony fa dia mamorona tsotra izao ary tena fanasoketana ranoiray no soratany. Orinasa iray eto Madagasikara tratran'ny fahasahiranana tao anatin'ity taona vaovao ity, ary tratran'ny fikatonana vetivety, no mbola nasiany mafy araka ny fitenenana, tonga amin'ilay fitenenana hoe tsindrio fa lavo. Tsy ferana ihany koa ny fisian'ny felaka ao ambadika avy amin'ny mpifaninana, izay henatra ho an'ny haino aman-jery malagasy amin'ny ankapobeny.
Azoko natao tsara ny miteny hoe tsy misy idirako ny amin'izany fa angaha izaho moa miasa ao intsony? Fa tsy mety ny saina, mody vazaha no soketaina ho mpisoloky, fa raha mahalala ny fizotran'ny asa, dia ny Malagasy ihany no tena afa-baraka sy lasibatra amin'ny lahatsoratra. Fa io moa tonga amin'ilay hoe alefa daholo ny lainga fanalam-baraka rehetra sao dia mahavoa sy maharesy lahatra ny mpamaky ihany.
Misy ireo anarana fantatry ny olona dia ireny no tena aderadera, saingy... efa nisy anaran'olona tsy misy ifandraisany amin'io orinasa io intsony notonontonina, entina handresena lahatra angamba hoe tena marina anie ity lazainay ity. Efa herintaona ilay vazaha iray voatonontonona no tsy mitantana ny orinasa intsony ary, raha izaho manokana, tsy mahalala izay misy azy hoe mbola eto Madagasikara ve sa tsia? Ary ny anaran'ny vazaha iray notononina faharoa indray dia tsy mipetraka eto Madagasikara, tsy manao asa ary tsy miditra amin'ny informatikan'ilay orinasa tiana alaina baraka.
Ny nandrafitra ny informatikan'ilay orinasa dia Malagasy ary efa nodimandry izy, telo taona lasa izay. Izaho izay manoratra dia efa tsy tao intsony herintaona taorian'ny nahalasa io Malagasy, sady tale tao amin'io orinasa io. Tsy mihevitra aho fa hahaova rafitra tao anatin'izay fotoana izay ireo "sisa tavela" tao amin'ny orinasa, sady ny fahamailoana amin'ny fitantanana ihany koa no mametraka fa tsy ataotao foana ny manova rafitra (informatika) raha tsy efa tena ilaina izany.
Izay fotsiny ihany dia ampy hamaliana fa lainga sy fanosoram-potaka no ataon'ilay gazety. Tsy mahasolo tena ilay orinasa aho ary tsy manana zo hanao setriny ao amin'ilay gazety, fa mampita izay ilaina ho fantatry ny hafa hoe gazety be mpamaky ve ianao dia tsy menatra ny hanoso-potaka? Kinendriny manko ny hanesorana ny fitokisan'ny mpanjifa amin'ilay orinasa... Dia lazaovy koa fa nomena vola aho namoaka izao lahatsoratra izao...